Ị nwere ike mfe Tọgharia Mmachibido passcode na iPhone / iPad
2 Mfe Ụzọ Tọgharia Mmachibido passcode na iPhone
Mmachi passcode bụ n'ezie a ezi ụzọ na-achịkwa nke gị na ụmụ gị na-eme na gị iPhone. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-echefu ya, ọ pụrụ ị banye ná nsogbu: Ị nwere ike ịzụta ihe ọ bụla na gị iPhone, wụnye ma ọ bụ iwepụ gị ngwa. Echegbula onwe gị, e nwere ndị ka ụzọ ụfọdụ iji tọgharịa mgbochi passcode. Soro ọmụma n'okpuru ịmụtakwu banyere mgbochi passcode.
Part 1: 2 Ụzọ iji tọgharịa mgbochi passcode na gị iPhone
Nkebi nke 2: Gịnị bụ mgbochi passcode
Nkebi nke 3: Olee otú ịtọ mgbochi passcode na gị iPhone
Ọ bụrụ na ị na-echefu gị iPhone mmachi passcode, mgbe ahụ, nanị nhọrọ bụ iji tọgharịa mgbochi passcode na gị iPhone. M na-ahụ na e nwere 2 ụzọ iji tọgharịa mgbochi passcode on iPhone. Họrọ onye nke ahụ dị mma maka gị.
Ngwọta 1: Tọgharia mgbochi passcode site Iweghachi gị iPhone ụlọ ọrụ ntọala
Ngwọta 2: Tọgharia iPhone mgbochi passcode site Ịchọpụta Mmachibido passcode na Mac
Nzọụkwụ 1. Malite iTunes na gị Windows PC ma ọ bụ Mac kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Buru ihe ndina gị iPhone. Pịa "Ike" button na "Home" n'out oge ruo mgbe ngwaọrụ bụ mgbagwoju. Hapụ "Ike" button ma na-ejide "Home" button.
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị iPhone na kọmputa site na eriri USB njikọ. Ijikọ ngwaọrụ, na-ejide "Home" button. Ozugbo ọ ejikọ, ngwaọrụ ga reconnect na iTunes logo na eriri USB na nwa ihuenyo. Ozugbo ị na-ahụ a na ihuenyo, hapụ "Home" button.
Nzọụkwụ 4. Gaa na iTunes omume na kọmputa gị na pịa "OK" bọtịnụ mgbe ị na-ahụ ịdọ aka ná ntị ozi "Iweghachite ọnọdụ". Pịa "Weghachi" button na-amalite-eweghachite. O nwere ike buru ọtụtụ minit, ma mgbe zuru ezu, gị iPhone e weghachiri ụlọ ọrụ ntọala.
The mfe ụzọ iji tọgharịa mgbochi passcode on iPhone bụ iji weghachi ya a ndabere faịlụ mere tupu mmachibido passcode e setịpụrụ. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ọnọdụ bụ na ọrụ ike chọta nkwado ndabere na mpaghara faịlụ mere tupu. Na nke a, ị nwere iweghachi gị iPhone ụlọ ọrụ ntọala. Otú ọ dị, otú a ga-ihichapu niile data na gị iPhone. Ọ bụrụ otú ahụ, na-gị mkpa data, ị ga-agbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS ike iṅomi gị iPhone ma na-data, dị ka kọntaktị, foto, videos na ozi ederede, si gị iPhone gị na kọmputa mbụ. N'okpuru ebe a bụ iji tọgharịa mgbochi passcode site Iweghachi gị iPhone ụlọ ọrụ ntọala.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone gị Mac. Ẹkedori iTunes na nkwado ndabere gị iPhone na iTunes.
Nzọụkwụ 2. Download ngwá ọrụ nke ga-agụ ihe mgbochi passcode na gị Mac. Adịrị zip faịlụ na ẹkedori ngwa. Pịa "Gụọ Backups" na họrọ gị iPhone.
Nzọụkwụ 3. Pịgharịa ala window, họrọ "iOS Files" na mgbe "Wepụ". Lelee ebe ebe ị na amịpụtara iOS faịlụ na ịnyagharịa iOS Files> Library> Mmasị.
Nzọụkwụ 4. Find na pịa emeghe faịlụ "com.apple.springboard.plist" na Ngwongwo List Editor. N'akụkụ SBParentalControlsPin, e kwesịrị a isi. Ọ bụ gị mgbochi passcode maka iPhone. Cheta na ọ na-atụgharị gị iPhone iji ya iji tọgharịa gị mgbochi passcode.
Mmachibido atụmatụ esịne ke iPhone-enye ohere nne na nna ịchịkwa nke ngwa na atụmatụ n'ime ekwentị ụmụ ha nwere ike ịnweta. Mmachibido nwere ike igbochi ikike na-eme ka video oku ma ọ bụ download ụfọdụ music kpọmkwem, fim na pọdkastị. Nne na nna akara nhọrọ eji a onye koodu nche (PIN) nke anọ digits - mgbochi passcode. Nke a nwere ike na-egbochi ntọala ndị nne na nna si na-nkwarụ ma ọ bụ gbanwere site ụmụ enweghị ikike.
Mmachibido bụ n'ebe amachi ụfọdụ ọrụ na-apụghị ahaziri ọnọdụ dị ka mgbanwe akaụntụ ịzụta enweghị chọrọ a paswọọdụ, wepụ ngwa ọdịnala, wdg Ya mere, anyị kwesịrị ịma ihe anyị ga-arụ ọrụ ma ọ bụ otú ntọt nche. Nke a dị nnọọ mkpa, ma isiokwu e metụrụ tupu site ọ bụla n'ime ndị editọ nke a website, ga-adị n'elu mesiri na ya.
Ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ọbụna maara unu mara na dị ka ị wụnye iOS ndabara, mgbe ị na-eme a zuo na iTunes na mgbe abanye paswọọdụ nwere ike ịnọgide na shopping-enweghị ihe a chọrọ ọzọ ruo mgbe nke 15, a ga-enwe nnọọ ala, ma, ọ N'ezie, ọ bụghị ndị kasị amamihe ma ọ bụ mma nhọrọ, karịsịa ma ọ bụrụ na e nwere ụmụaka ndị nwere ohere a na kọmputa n'oge oge na ajụjụ.
Open Ntọala> Ozuruọnụ> Mmachibido na akọwa na ngosi ịchọta ederede, aka na ya na e nwere ihe mgbochi ndị ọzọ nke ị nwere ike rụọ ọrụ na-egosipụta a igbe na-arịọ na-ewebata a koodu, nke ga-ikwugharị ugboro abụọ iji nyochaa na ọ bụ ihe ziri ezi.
Nzọụkwụ 1. Gaa Ntọala> Ozuruọnụ> Restrictions.You mkpa "Kwado mgbochi" ọ bụrụ na ị nyeere ya na mbụ.
Nzọụkwụ 2. Tinye 4-ọbula paswọọdụ na i nwere ịbanye oge ọ bụla mgbe ị chọrọ ime mgbanwe iji mmachibido n'ọdịnihu nakwa iji gbanyụọ ha.
Nzọụkwụ 3. Ị ga-jụrụ paswọọdụ abụọ oge iji gosi ya. Mee niile ị na-eche dị mkpa maka mgbochi na-ozi nkeonwe gị mma.
Na ndị a na ihe mgbochi i nwere ike igbochi ojiji nke ala iOS égwu nke ọdịnaya gị ebudatara. Otú a ị nwere ike ikwe ka ma ọ bụ machibido ojiji nke ala iOS ngwa ọdịnala dị ka Safari, igwefoto, Face oge, iTunes na iBook Store, n'etiti ndị ọzọ nhọrọ nanị site na ịpị on-anya mgba ọkụ na-egosi na onye ọ bụla menu. Nke a bụ nnọọ na-akpali mmasị na-n'enweghị ndị a ngwa na-inweta ụmụ na ndị ọzọ bụ ndị nwere ohere na ngwaọrụ.
I nwekwara ike ịgbanwe ntọala nke mere na ha nwere ike ghara wụnye ma ọ bụ wepu ngwaọrụ ngwa ma ọ bụ ị pụrụ ọbụna họrọ mba na afọ Fim nke ngwa. I nwekwara ike n'ihu igbochi n'ahụ na-agaghị emeli nke ngwa site na-ahọpụta afọ ịgba, ị na-ahọrọ n'etiti +4, +9, +12, na +17 afọ ma ọ bụ afọ ịgba ndabara maka fim nwere ike ibudata. Iji mee nke a ị nanị nwere pịa taabụ ngwa ma ọ bụ na fim, họrọ elu nso nke afọ na-ekwe ka downloads, ma si otú na-akpaghị aka ngwa ọdịnala na / ma ọ bụ na fim na-n'okpuru a ịgba ghara atara.
> Resource> iPhone> Tọgharia Mmachibido passcode na iPhone